﻿ नेपाल टेलिकमको प्याक कसरी लिने ? जान्नुहोस्
नेपाल टेलिकमको प्याक कसरी लिने ? जान्नुहोस्
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमले आफ्नो ग्राहकलाई सस्तोमा भोइस प्याक उपलब्ध गराइ रहेको छ ।
नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेका अनलिमिटेड डे भ्वाइस प्याक र अनलिमिटेड नाइट भ्वाइस प्याक अफरहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । यी प्याक प्रयोग गर्दा पैसा सकिने चिन्ता नलिई जति पनि कुरा गर्न सकिन्छ ।